Shiinaha SHAQADA SHAQADA SHARCIGA warshad iyo soosaarayaasha | Taariikh
Qalabka Shaqada kulul ee Birta ah, sida magacooda ka muuqata, ayaa loo isticmaalaa halka heerkulka hawlgalka ee aaladda uu gaari karo heerar halkaas oo iska caabinta jilicsanaanta, hubinta kuleylka iyo naxdinta ay muhiim tahay, Waxay leedahay iska caabin kuleyl badan iyo iska caabin dhexdhexaad ah, Kala-soocidda qallafsanaanta ayaa gaabis ah
Qalabka Shaqada kulul ee Birta ah ee Isku-wareeg ah
Qalabka Shaqada kulul ee birta ah oo duuban
Qalabka Shaqada kulul ee Baararka Birta ah
Hot Work Tool Steel waxay leeyihiin sifooyin soo socda ：
Iska caabinta naxdinta kuleylka
Heerkulka-sare ayaa iska caabiya iska caabin
Iska caabbinta daxalka-heerkulka sare
Qalabka Shaqada Kulul ee Birta ah, sida magacooda ka muuqata, ayaa loo isticmaalaa halka heerkulka hawlgalka ee aaladda uu gaari karo heerar halkaas oo iska caabinta jilicsanaanta, hubinta kuleylka iyo naxdinta ay muhiim tahay, Waxay leedahay iska caabin kuleyl badan iyo iska caabin dhexdhexaad ah, Kala-soocidda qallafsanaanta ayaa gaabis ah.
Kooxdan birta ah waxay ku fiican tahay adeegsiga sida dhimashada-tuurista dhimatay, dhimashadda extrusion, caaga wax taaj oo kale u dhinta, Khaldan kulul oo been abuur ah, Gripper kulul iyo cinwaanka Dies, mandrels kulul, feer shaqo kulul iyo mindiyo xiir kulul
Inta badan SHAQADA SHAQADA SHAQADA Fasalka No. Waxaan Bixinnay:
Qalafsanaan sare, iska caabin heer sare ah iyo adkeyn kulul. wuxuu leeyahay caabbinta shooga kuleylka wanaagsan, (ESR) H13 wuxuu leeyahay isku mid ahaansho weyn iyo qaab dhismeed aan caadi aheyn oo wanaagsan, taasoo keentay in la hagaajiyo farsamaynta, waxqabadka iyo heerkulka sare ee kuleylka.
Cadaadiska qalabka wax lagu ridayo ee dhinta, xoqida dhinta, abuurida dhinta, garbaha xiirirka kulul, shaabbinta dhinta, wasakhda balaastigga ah, Waxqabadka kulul ee shaqada, ESR H13 waxay ku fiican tahay aaladaha aluminiumka u dhinta iyo qalabka caaryada caaga ah oo u baahan boolis aad u sarreeya
Adag saameyn xoog leh. Waxyaabaha loo yaqaan 'tungsten' ayaa bixiya caabbinta dabeecad wanaagsan, qallafsanaan qoto dheer, bir hawo-qallajinaysa oo soo bandhigaysa isbeddel cabbirka ugu yar inta lagu jiro daaweynta kuleylka. Iska caabin wanaagsan dillaacista daalka kuleylka
feedhyo kulul, dhimashadii dhimashadu way dhimataa, been abuurku wuu dhintaa, garbaha xiirran ee kulul, qabashada kulul ayaa dhinta, iyo ciribtirka ayaa dhinta.
Adkaysiga sarreeya, adkaanta aadka u fiican, caabbinta wanaagsan ee shoogga kuleylka marka biyuhu qaboojiyaan adeegga, isbeddelka cabbirka ugu yar inta lagu jiro daaweynta kuleylka.
Waxaa lagula talinayaa codsiyada qalabaynta kulul halkaasoo looga baahan yahay iska caabbinta ugu badan ee dildilaaca. Feer kulul, dhimashadii dhimatay ayaa dhimatay, been abuur ayaa dhimatay, garbaha xiirirka kulul, qabashada kulul ayaa dhimatay, extrusion wuu dhintaa.
Cadaadis aad u fiican oo jilicsanaanta heerkulka sareeya. aad ugu adkeysanaya daal dillaaca kuleylka, oo biyo ku qaboojin kara adeegga
Qalab culus oo bir-tuuris ah oo bir ah, Daloolida Mandrels, Feer kulul, foojignimo, aalado xiirid kulul
Waxay muujisaa iska caabin aad u fiican oo jilicsanaanta heerkulka sare. Ma aha in biyo lagu qaboojiyo adeegga illaa qalabku uu ku jiro socodka joogtada ah ee qaboojinta biyaha gudaha. Nalalka kuleylka waa in laga fogaadaa
Waxaa lagugula taliyay codsiyada qalabaynta shaqada kulul ee adag sida extrusion naxaas ah, naxaas u dhinta naxaasku, feedho kulul, been abuuris kudhisan.
Adag saameyn xoog leh iyo caabbinta wanaagsan ee jilicsanaanta heerkulka sare. iska caabin wanaagsan oo ku saabsan shoogga kuleylka iyo dildilaaca daalka kuleylka, isbeddelo cabbir yar oo isbeddel ah inta lagu jiro adkaanta
Dhimato been abuur, dhinto shubay, extrusion, muraayadda processing ,. Mandrels, Kuwa haysta
Badanaa Qalabka Shaqada Qabow ee Birta Fasalka Nambarka waxaan bixinay:
DHAGAX DHIGAY DHAMMAAN DHAMMAAN
Hore: MARKII XARUNTA EE BARTA 1.2344-H13
Xiga: HSS CIRCULAR SAW KAADHAYA
Shaqo kulul Birta Iibiyaha
Hot Work qeybiyaha Steel
Hot Work qeybiye
Hot Work Supply
Tct Wareegga Mashiinka Loogu Talagalay Birta, Qalabka Shaqada kulul ee Birta Lagu Dhejiyo, Hss M35 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Mashiinka Mashiinka Wareegga Wareega ah, Tct Wareegga Wareegga Sawirka, Hss M2 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah,